Sunday 5th of December 2021 / 06:38:40 PM
अनलाइन दर्पण 2018-04-11
म तिमीलाई राम्री देख्न छोडिसकें ।
यो पर्दा भित्र तिमी जहाँ छौ
केपी शर्मा ज्ञावली
अनलाइन दर्पण 2018-04-07
बगाएर आँसु धारा जाने कहाँ होला ?
सुन्य पारी बस्ती सारा जाने कहाँ होला ?
नाबालकको पेट भर्ना भौतारिदै फेरी,,
कुन भण्डार भर्न प्यारा जाने कहाँ जाने होला ?
कविताः आमा नाई म फुल्न चाहान्न
भो मलाइ मलजल नगर
मायाले गोडमेल नगर
पारेर पत्र पत्र
छाडेको देख्दा देख्दै
कालो गुफामै म ठिक छु
म बाहिर खुल्न चाहन्न
नाइ म फुल्न चाहन्न ।
कथा कसको हुँदैन ? जसले जिन्दगी पाएको छ वा जसले जिन्दगी पाएको छैन–– सबैको । सबैलाई आफ्नो कथा ठूलोे लाग्छ । एउटा अरबपति होस् या बगरमा गिट्टी कुट्ने मानिस, खोलामा बगिरहेको ढुंगा होस् या खोलैमा अल्झिरहेको काठको मुढा– सबैका आफ्ना कथा
मेरो मुटूमा बसेको ए प्यारो मान्छे
किन हो भन त यसरी तर्किन थालेको ?
हिजोसम्म त भथ्यौ,
मैले तिम्रो मुटूमा नछुट्ने गरि बास गरेको छु
आज के भयो हँ ?
कि त्यसै नाटक गरेको थियौ ?
हुन त यो संसार नै रंगमञ्च हो
भक्तपुर । विगत एक दशकदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील सञ्चारकर्मी हरिसुन्दर छुकांको बाल कविता सङ्ग्रह ‘चित्रजस्तो देश’ प्रकाशनमा आएको छ ।
पत्रकारिताका अलावा साहित्य क्षेत्रमा पनि निरन्तर कलम चलाउँदै आएका भक्तपुर चाँगुनाराय
कन्या अर्थात मेरि प्रेमिका
म अर्थात तिम्रो घुम्टो उघार्ने मान्छे
तिमि मान या न मान
आफ्नो ठान या न ठान
मेरो मन सङै जोडियर
तिमि कन्याम भएकि हौ
तिम्रो ओठ जस्तै लाग्छ
यि हासिरहेका तिन पाते सुइरो
कविता: मेरो छोरोलाई गुण्डा भन्नुहोस्
अनलाइन दर्पण 2018-02-20
काठमाडौं। नायिका प्रियंका कार्की अभिनित नयाँ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । ‘सपनीमा आउनेलाई’ बोलको गीतमा प्रियंका कार्की ६० जना कोरसको बीचमा देखिएकी छिन् । मेलिना राईको स्वर रहेको गीतमा दिपेन्द्रनाथ शर्माको शब्द र बसन्त सापकोटाको संगी
काजल तामाङले चुमिन मिस ईकलेज २०१८ को उपाधी
अनलाइन दर्पण 2018-02-18
काठमाडौं । सिजन मिडियाले आयोजना गरेको ‘मिस ईकलेज २०१८’ मा व्रिटीस कलेजमा अध्ययनरत २० वर्षीय काजल तामाङले शीर्ष ताज चुम्न सफल भइन। राजधानीको अक्षरा स्कुल काडाघारीमा शनिबार सम्पन्न भएकाे कार्यक्रममा उनलाई मिस इकलेज २०१५ की विजे
साना कुराहरुमै मुस्कुराउने बानी पर्‍यो जापानमा
हरियो पासपोर्ट बोकेर अन्तर्रास्ट्रिय बिमानस्थल छिर्ने बितिकै मेरो मनमा जापानका दृश्यहरुले कब्जा जमाउन थालेका थिए ।
आहा ! त्यो प्लेनमा बसेर बादललाइ नियाल्दै कल्पना गरेको जापान क्या गजब् थियो।
मलाई फेरी पनि त्यही
१४ फेब्रअरी, कुन राशिको लागि भ्यालेन्टाइन डे कस्तो ? यी ४ राशीको भाग्य चम्कने…
अनलाइन दर्पण 2018-02-07
मेष राशि भएका व्यक्तिहरू धेरैजसो सिंह राशिप्रति आकषिर्त देखिन्छ। यो आकर्षण तत्कालका लागि बढी स्वप्निल हुन्छ। लामो समयका लागि भने मेष राशिको जोडी मकर र कुम्भ राशिसँग सकारात्मक हुन्छ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले अन्य राशिलाई पनि मन प
जन्मदिने आमालाई छोराले वृदाश्रममा लैजान खोज्दा बुहारीले रोकेपछि… हेर्नुहोस भिडियो
काठमाडौँ । नयाँ नेपाली छोटो चलचित्र आमा सार्वजनिक गरिएको छ । १६ मिनेट लामो चलचित्रले आमाको महिमालाई राम्रोसँग उजागर गरेको छ ।
आँफुलाई जन्मदिने आमालाई छोराले हेला गरे पनि बुहारीले भगवान मानेर आफ्नो श्रीमान्लाई सम्झाएर आमाको महिमा बताएको भ
जब म २१ वर्षमै कुमारी आमा बने...
जब प्रेम भयो, मलाई यी कुरासँग केही मतलब भएन– ऊ कुन देशको, कुन धर्मको र जातको थियो ।
तर ‘लिभ–इन रिलेसन’ छुटेको एक महिना जति भएपछि जब म उसको बच्चाकी आमा हुने भएकी थिएँ तब मेरा साथीहरूले मलाई पागल भइसककेी भन्थे ।
वरिष्ठ अभिनेता एवं रङ्गकर्मी शर्मा सम्मानित
भक्तपुरको लोकन्थलीस्थित ॐ ज्ञान मन्दिर स्कूलको आज आयोजित २३औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसमा स्
कविता : गुरु
सभ्यताको मार्गमा हिडाँउने हामिलाई तपाई देवता समान ।
ज्ञानको ज्योति फैलाई सँसारमा उज्यालो छर्ने तपाँई कति महान ।
विद्यार्थीको सङ्घर्षलाइ तपाईले लाफ्नो सरह ठान्नु हुन्छ ।
विद्यार्थीको सफलतामा पनि आफु सफल भएको मान्नु हुन
महिलाहरु किन परपुरुषहरुसँग फेसबुकमा जिस्किने गर्छन.....
आसु प्रणवको सपनाले बाटो बदले पछि…(भिडियो सहित)
काठमाडौं । मान्छेले नै हो सपना सजाउँने । हुन पनि मान्छेले जन्मसिद्ध पाएको एउटै अधिकार भनेकै सपना देख्ने हो तर त्यही अधिकार पनि खोसियो अथवा सपनाको बाटो नै बदलियो भने के होला ? यस्तै भएको छ गायक तथा संगीतकार आसु प्रणवको सपनामा पनि अर्थात उनको गीत मो
अन्तिम सम्म पढ्नु, फोटो भन्दा कथा राम्रो छ
"बाबा बाबा तिँगानी ले आदपनी कुति मलाइ !" बजार बाट आइपुगेको मात्रै थिएँ। खाना खाइरहेकी छोरी जुरुक्क उठेर रुँदै म भएको ठाउँमा आउँछे । अनि आफ्नी आमा (सिँगानि) को पोल सुनाउछे ।
सिँगानी ठुला आँखा पारेर हामी बाउछोरी लाई हेर्छे ।
तिर्थ राज सुवेदी
दाजुभाइकाे सम्बन्ध हाेस् त, यस्ताे पाे ।
कुनै एउटा गाउँमा दुई जना दाजुभाइहरु बस्दथे , उनीहरु एक आपसमा धेरै माया गर्दथे । खेत अलग-अलग थियो तर नजिकै, आमने- सामने ।
ठुलो दाइ विवाहित थिए, सानो भाई चाहिं अविवाहित, एक्लो ।
एकवर्ष धानको खेती यति धेरै राम्रो भयो